Ukwenza ama-biogas kusuka kumfucumfucu wamazambane Ukuvuselelwa Okuhlaza
Khiqiza ama-biogas kudoti wamazambane
Kunezindlela eziningi zokukhiqiza amandla avuselelekayo noma ukumane ukhiqize amandla kusuka ekusetshenzisweni kwemfucuza noma izinto ezisetshenzisiwe. Isibonelo, sizidlulisela esikhungweni sezindiza sokulungiswa kwamanzi angcolile kanye nokukhiqizwa kwe-biogas okwenziwa ngaphakathi kwephrojekthi ye-LIFE WOGAnMBR.
Imayelana nokukwazi ukwenza nokukhipha ama-biogas kudoti eqandisiwe ye-kibble namazambane athosiwe. Ngabe singawukhiqiza ngempela amandla ngokusebenzisa lolu hlobo lwemfucuza?
1 Ukukhishwa kwe-biogas
2 Iphrojekthi yesitshalo sezindiza
Ifektri yokudla efriziwe Ama-euro nama-chip amazambane Bahlolile futhi bakha ubuchwepheshe obusebenzisa ulwelwesi ukuthola nokuhlunga amanzi asezingeni eliphakeme. La manzi angatholakala ngokunisela kanti ama-biogas akhiqizwe kule nqubo angasetshenziselwa ukusetshenziswa kwamandla ezitshalweni zokukhiqiza.
Okwamanje, imiphumela engcono itholakele ekutholeni ama-biogas ezitshalweni zeMatutano. Izimboni ezimbili zokudla zivivinye ukukhiqizwa kwe-biogas kusetshenziswa lesi sitshalo sokushayela usebenzisa ubuchwepheshe be-AnMBR. I-Eurofrits, etholakala ePozuelo de Alarcón (eMadrid), ikhiqiza kakhulu inyama efriziwe, inkukhu, inhlanzi, ama-croquette namazambane kanye nezipisi zeMatutano eBurgos.
Iphrojekthi yesitshalo sezindiza
Le phrojekthi iba nemiphumela emihle ezitshalweni zomshayeli ezisebenza ngemithwalo ehlukahlukene yemvelo. I-biomass isebenze kahle. Kukwazile ukufinyelela kumalitha angama-9.600 ama-biogas ngosuku ngekhwalithi ye-methane engu-75%. Lokhu kukhombisa ukusebenza kwezobuchwepheshe, ezomnotho nezemvelo kwalolu hlobo lwephrojekthi. Inzuzo enayo ayigcini nje ngokukhiqiza ama-biogas ekukhiqizeni amandla kepha futhi ihlunga amanzi angasetshenziselwa ukunisela. Inhloso ukunciphisa ukukhiqizwa kwamadaka ngangokunokwenzeka futhi kuzimise ngokwako ngokwanele ngokombono wamandla.
Ngaphezu kwalokho, le ndlela iguquguquka kunoma iyiphi inqubo embonini yezokudla, isiza ekwehliseni ukusetshenziswa kwezinto zokusetshenziswa nokunciphisa imfucuza eyenziwayo. Ngalolu hlelo lwe-ulwelwesi, kutholakala ukuhlunga okwenziwa ngamanzi angcolile ezimbonini yenze ilungele ukunisela ngoba zonke izinhlobo zezinhlayiya eziqinile ezidala ukuvaleka emapayipini ziyanyamalala.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Ama-biofuels » I-Biogas » Khiqiza ama-biogas kudoti wamazambane
Ngingalibala kanjani inani lamapaneli elanga engiwadingayo?
U-Elon Musk: "Uma ngikwazi ukuxazulula izinkinga zamandla e-Australia ezinsukwini eziyi-100, ngizokwenza mahhala"